Uche Archena | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Murcia, Oge ntụrụndụ
Anyị na-eru nso n'oge okpomọkụ ma ọtụtụ n'ime anyị na-ahazi ezumike. Anyị enwere ike ịga mba ọzọ ma ọ bụ afọ a, anyị ga-anọ na mba ahụ? You na-ese ugwu ma ọ bụ osimiri n'akụkụ afọ a? Ọ ga-abụ ogologo ezumike ma ọ bụ naanị ụbọchị ole na ole? Gịnị ma ọ bụrụ na afọ a anyị nwara ụfọdụ mmiri ọkụ? Ọ bụrụ na anyị họrọ mmiri ọkụ, ezigbo nhọrọ bụ Archena Spa.
Mmiri mmiri ọkụ Ha dị nso na Alicante na Murcia ha abụwokwa ebe a ma ama na spa n'akụkụ a nke Spain maka oge mkpuchi. Ka anyi mata Archena Spa taa.
2 Gaa Leta Archena Spa
Na spa dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Spain, n'ógbè Murcia, nke dị n'akụkụ osimiri Segura na na Natural Park nke Valle de Ricote. Nke a 80 kilomita site na Alicante na naanị 24 site na Murcia ya mere ị nwere ike ịpụ ma nọrọ ụbọchị ole na ole n'ime mmiri ọkụ, na-atụrụ ndụ.
Spa a laghachiri n’akụkọ ihe mere eme n’ihi na iyi ndị na-ekpo ọkụ emewo agadi. O yiri ka ndị ọbịa a jiri mmiri ọkụ wee malite na narị afọ nke ise BC, n'aka ndị Iberia, mgbe ahụ mpaghara ahụ ghọrọ akụkụ nke ụzọ azụmahịa gara n'isi obodo Turdetania, Cástulo. O doro anya na ndị Rom Ha hụrụ ya n'anya na ha bụ ọrụ maka iwu nke bat mbụ ahụ n'onwe ha.
Nke ahụ bụ ịsị, eji arụ ụlọ akpọrọ aha maka ịnụ ụtọ na ime ụlọ ịwụ ahụ. N'ihi ya, ndị ọkà mmụta ihe ochie nke oge a chọtara ozu nke ogidi, ebe a na-ekpo ekpo ọkụ, ụlọ oriri na ọ storyụ ,ụ nwere okpukpu abụọ, ebe a na-a ofụ mmiri ọ drinkingụ thatụ nke ga-ekesara ya mgbe e mesịrị, yana ọnụ ụzọ ya ka na-arụ ọrụ, ihe fọdụrụ nke mmiri na-adịghị na mmiri.
Spa ka na-arụ ọrụ ma na oge ana - emepechabeghị anya ọ nọ n’aka Order of Saint John nke Jerusalem. Site na narị afọ nke iri na isii ọ malitere ịmalite ama, mgbe ahụ ụzọ gasị na-mma na na narị afọ nke iri na itoolu bụ na ọ na-anabata ụdị obodo mepere emepe ugbu a, nke a na-ahụkarị na spa nke oge ahụ, nwere ọtụtụ hotels: Hotel Termas, Hotel Madrid na Hotel Levante, cha cha ...
Gaa Leta Archena Spa
Mmiri ndị na-ekpo ọkụ dị ka mmiri ọkụ. Ebe a mmiri bụ sọlfọ, sọlfọ, chlorinated, sodium, calcium, ma pụta na okpomọkụ nke 52C nke nnukwu mmiri. Mmiri ebe a bụ ihe pụrụ iche maka ya ihe onwunwe enwetara mgbe afọ 15 puku n'okpuruala.
Mmiri ndị a na-ekpo ọkụ bụ ihe na-eme ka ahụ sie ike, ha dị mma iji wepụ nrụgide na izu ike, na mgbakwunye na ịgwọ ụfọdụ nkwonkwo nkwonkwo ma ọ bụ mee ka akpụkpọ ahụ dị nro. Ha dị mma maka rheumatism, ọnọdụ ngụgụ na mgbu ọkpụkpụ Ọzọkwa. O doro anya na anyị enweghị ike ịmaba na mmiri karịa 50ºC na-enweghị ọkụ onwe anyị, yabụ nkezi okpomọkụ bụ 17ºC. Ọ bụrụ na ị gbakwunye na nke a na ọ bụ ala mara mma nke anwụ na-acha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku awa atọ nke Phoebus na mbara igwe otu afọ… nke ahụ dị mma!
Archena bu ihe di mgbagwoju anya ya mere, ihe kachasị mma bụ ịbịa nọrọ n'ụlọ nkwari akụ n'ime. Enwere atọ ịhọrọ site na ngụkọta nke ụlọ 253. Na Nkwari akụ Termas na Lelọ nkwari akụ Levante kpakpando anọ, mgbe Leonlọ nkwari akụ Leon Ọ bụ kpakpando atọ.
Terlọ nkwari akụ nke Termas sitere na narị afọ nke 68 ma nwee ọmarịcha ọhụụ-Nasrid nwere oyiri nke Isi Iyi nke Ọdụm nke Alhambra gụnyere. Ọ na-enye WiFi n'efu na ebe ezumike na nnweta n'efu na mgbagwoju ọkụ. O nwere ime ụlọ XNUMX nwere ime ụlọ ịwụ ahụ zuru ezu, TV nwere akara mba na obere mmanya. O nwekwara ime ụlọ erimeri. Hotellọ nkwari akụ ahụ Levante bụ otu ihe ahụ.
Lelọ nkwari akụ León nwekwara ohere kpọmkwem na spa, ya bụ, ịkwesighi ịhapụ ụlọ nkwari akụ iji gaa mmiri ọkụ. O nwere ime ụlọ 117 nke emezigharịrị ọhụrụ, na ala atọ. Lelee na 3 elekere ma lelee na 12, dị ka ebe obibi abụọ ọzọ.
Ihe mgbagwoju anya mejuputara ọdọ mmiri ndi na-agha oku, okirikiri nke okpokoro na oria ogwu a na-enye. E nwere nnukwu ọdọ mmiri abụọ, otu n'èzí na otu ime ụlọ. N'ime mmiri ị nwere ọrụ mmiri mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri, iyi, nsụda mmiri, jacuzzis na ọdọ mmiri. Enwekwara mpaghara n'akụkụ osimiri, ime ụlọ na-agbanwe, ebe a na-eri nri. Igwe ihe eji eme ebe a bu ebe di anya n'ihi na enwere oge opupu ihe ubi na ebe a na-ahu rlọ oriri na ọ Theụ whichụ bụ ebe ọgwụgwọ ahụike.
Usoro ọgwụgwọ ndị a bụ ndị ọkachamara na-ahụ maka ọgwụ na mmiri (ihe ọmụma banyere mmiri ọkụ na-agwọ ọrịa). N'ihi ya, na ọgwụgwọ menu anyị na-ahụ hydromassages, mmiri okirikiri, ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ, ọgwụgwọ iku ume, stovu mmiri, ọgwụgwọ apịtị, ịhịa aka dị iche iche na mmemme physiotherapy.
E nwere otu ịhịa aka n'ahụ a na-akpọ Archena ịhịa aka n'ahụ nke a na-eme n'okpuru mmiri na-ekpo ọkụ na apịtị, dịka ọmụmaatụ, imeziwanye nlọghachi na ịtọghe nkwekọrịta. Apịtị bụ ụrọ na-agwakọta na mmiri ịnweta mmiri na 45ºC. Etinyere ya na nkwonkwo, ọ nwere mgbochi mkpali na analgesic edinam.
N'aka nke ozo enwere akuku emere baptism dika Termachena nke bụ obere okpomoku na-ekpo ọkụ, ọdọ mmiri 37 ºC, mmiri ozuzo ọkụ, ice na ụlọ maka obere esemokwu ntuziaka. Nsonazụ ahụ? Dị gị ka ụkwụ wuruwuru dị ka akwa bebi.
Mgbe nleta gị na Archena Spa ị nwere ike iwere gị ngwaahịa dị iche iche dị ka ihe ncheta: gels bath, milks anụ ahụ, shampoos pụrụ iche, mmiri ọkụ, mmiri ara ọcha, creams na-egbochi ịka nká na mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ, mmiri caviar, ihu ihu na ude aka.
Ozi bara uru banyere Balneario de Archena:
N’oge: Mọnde ruo Sọnde site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere itoolu nke abalị (Jenụwarị rue Machị 10, Nọvemba na Disemba); bido na elekere iri nke ututu rue nke iri (site na Machị 9, Eprel, Mee, June, Septemba na Oktoba); site na elekere iri nke ututu rue nke iri na abali (July na August) na December 15 na 10 site na 10 ruo 16 elekere.
Ahịa: na ụbọchị ụfọdụ ọnụahịa bụ 14 euro maka okenye na 22 na ezumike. Oge ndị ọzọ na-eri euro 12 site na Mọnde ruo Fraịde na ngwụsị izu euro 18 na ụbọchị ndị ọzọ, euro 16 na 22 n'otu n'otu. Lelee weebụsaịtị maka ụbọchị ndị a. Pricegwọ nke Cirr Thermal bụ euro 25 na ụbọchị izu na 35 na Satọde na Sọnde. Euro 30 maka ndị bi na spa.
Enwere nchịkọta na ebe obibi na enweghị ebe obibi. si 48 euro ị pụrụ ịnụ ụtọ a ụbọchị na di na nwunye ịhịa aka na ohere ka kwes circuit. Na ebe obibi enwere nchịkọta ụbọchị atọ nke ebe obibi na atụmatụ nri na ọgwụgwọ dị iche iche site na 144 euro kwa onye. Ga-enweta mbelata 15% ma ọ bụrụ na ịzụta otu ọnwa tupu. Nhọrọ dị ọnụ ala karịa sitere na euro 94 maka abalị abụọ nke gụnyere ụzọ ịnyịnya ígwè. Ọbụna nke dị mfe, site na euro 100 ị nwere abalị anọ, nri gụnyere yana ịnweta ọdọ mmiri n'efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Murcia » Archena Spa
Ebe a na-edebe ihe nkiri Reina Sofia